Ivory Coast 2020 mutungamiri: nyeredzi Eudoxie Yao anoda kutarisana naAlassane Ouattara naBédié - teles relay
Mutungamiriri weIvory Coast 2020: Nyeredzi Eudoxie Yao anoda kutarisana naAlassane Ouattara naBédié
Mumwe anozivikanwa weIvorixie Yao ane mukurumbira wenhau munhau munguva pfupi yapfuura akataura chishuvo chekumirira sarudzo inotevera yemutungamiri muCôte d'Ivoire.
Chokwadi iyo Ivorian bimbo Eudoxie Yao haizomboregi kushamisa veruzhinji pamasocial network. Mushure mekuratidzira mota mbiri dzerudzi rweRange Rover pamwe nehuwandu hwemamiriyoni makumi maviri nemashanu Fcfa yaanoti akagamuchira pachiitiko chekuzvarwa kwake kupembererwa musi wa21 Chikumi.
Iye achangobva kuva muenzi pachiratidziro "Anopomerwa, simuka" mukati mayo akazivisa mwero wake wekufunda. Iyo "yechipiri D" ngazi yaakange achengeta. Izvi zvakamuunzira kusekwa kwevashandisi veInternet vanoverengeka, kunyanya sezvo pasina huwandu hwerudzi urwu rusipo mukirasi yechipiri muIvory Coast.
Achangoburitsa mutsara unomutsa nhaurwa dzinopisa pamasocial network. Eudoxie Yao aratidza kushuvira kumira musarudzo yemutungamiri wenyika muna Gumiguru 2020. Zvirinani hazvo, anoti anotova nehuwandu hwekuiswa kwemamiriyoni makumi mashanu Fcfa, inobhadharirwa kumiriri. Anotsvaga zano revatsigiri vake kuti vamubatsire kuita iyi sarudzo.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https: //afriqueshowbiz.com/cote-divoire-la-star-eudoxie-yao-veut-affronter-alassane-ouattara-et-bedie-a-la-presidentielle2020/
Shamwari yeaNollywood mutambi, Angela Okorie anoratidza zvese nezvemurume wake asinganzwisisike.